मुक्तिनाथ विकास बैंकको ऋणपत्रमा आजदेखि आवेदन दिन सकिने, ब्याजदर कति ? « नेपालबहस
मुक्तिनाथ विकास बैंकको ऋणपत्रमा आजदेखि आवेदन दिन सकिने, ब्याजदर कति ?
प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७८, बिहीबार ०७:०२
७ साउन, काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको वार्षिक ८.७५ प्रतिशत ब्याजदर पाइने ऋणपत्रमा आज (साउन ७ गते) देखि आवेदन दिन सकिने भएको छ।
बैंकले आजदेखि ‘८.७५ प्रतिशत मुक्तिनाथ डिबेञ्चररऋणपत्र २०८४/८५’ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो। सो ऋणपत्रको अवधि ७ वर्ष रहनेछ।
बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यका १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ५० हजार कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो। सोमध्ये ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ भने बाँकी ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ५० हजार कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ।
सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने कुल शेयरमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात २५ हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषहरुलाई छुट्याइएको थियो। जसमध्ये १ हजार ५०० कित्ता बाँडफाँट गरिएको बैंकले जनाएको छ।